Marka oo gacanta u gashay ciidamada dawladda - BBC Somali
Marka oo gacanta u gashay ciidamada dawladda
Image caption Ciidammada Soomaaliya
Wararka laga helayo magaalda Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidammada dawladdu ay qabsadeen saaka aroortii bartamaha magaalada oo dhawrkii maalmood ee ugu danbeyeeyay ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab.
Ciidammo ka tirsan kuwa milatariga dawladda oo ka soo dhaqaaqay deegaanka buufow oo ah duleedka Marka ayaa saaka galay gudaha magaalada iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah.
Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in ay arkayeen gawaarida dagaalka ee ciidamada dawladda oo gaaf wareegaya xaafadaha magaalada iyadoo mararka qaarna la maqlayo rasaas.
Ciidamadii Al-Shabaab ee ka baxay Magaalada Marka ayay wararku sheegayaan in aanay ka fogeyn halkaasi, waxana dadka deegaanku ka baqayaan in xili kasta uu magaalada dagaal ka bilowdo.
Dagaal shalay galinkii danbe ka dhacay degaanka Buufow oo qiyaastii seddex km u jira Marka ayay xarakada Shabaab ku sheegatay in ay ku qabsatay gaari dagaal oo ay lahaayeen ciidammada dawladda kuna dileen dhawr askari.